ॐ बाहन गरुड भए पनि भगवान विष्णु किन सर्पको ओछ्यानमा सुत्छन् ? - Sabal Post
ॐ बाहन गरुड भए पनि भगवान विष्णु किन सर्पको ओछ्यानमा सुत्छन् ?
भगवान विष्णुका २४ वटा अवतार छन् । सम्पूर्ण चराचर जगतको रक्षार्थ भगवान विष्णु कहिल बराह अबतारमा प्रकट भएका छन् त कहिले मत्स्य, कहिले नारद, कहिले परशुराम त कहिले श्रीकृष्ण अवतारमै प्रकट भएको शास्त्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै धार्मिक ग्रन्थका अनुसार हरेक देवी देवतादेखि दानवसम्मका आ–आफ्नै बाहनहरु पनि तोकिएका छन् । आफ्नो बाहनमाथि उनीहरुले अधिपत्य जमाइरहेका हुन्छन् । तर भगवान विष्णुको बाहन गरुड भए पनि उनले सर्पको ओछ्यान बनाएर आराम गरिरहेका कैयौं प्रतिमा तथा तस्विर देख्दै आएका छौं । उनका हरेक प्रतिमा तथा चित्रहरुमा गरुडसँगै नाग (शेष नाग) जोडिएको हुन्छ ।
त्यसो त भगवान विष्णुलाई पापको सागरबाट दुनियाँलाई मुक्त गर्ने प्रतिकको रुपमा लिइन्छ । समयअनुसार जब संसारमा पाप बढेर गएको थियो, तब विष्णुले सकल जगतको उद्धार गरेका थिए । शेषनाग ‘अनन्त’ अर्थात जसको कुनै सीमा छैन, त्यसको प्रतिक हो । हिन्दु धर्मका अनुासर शेषनाग भगवान विष्णुको उर्जाको प्रतिक हो, जसमा उनी आरम गर्छन् । सबै ग्रह बस्ने आसन हिन्दू पौराणिक कथा अनुसार शेषनागले आफ्नो कुन्डलीमा सबै ग्रहलाई राखेको छ । र, उसले भगवान विष्णुको मन्त्रोच्चारण गर्छ ।
शेषनाग भगवान विष्णुको केवल आरम गर्ने स्थान मात्र नभएर रक्षक पनि भएको हुँदा उनी शेष नागमा शयन गर्ने गरेको शास्त्रमा उल्लेख छ । त्यस समयमा भगवान कृष्णलाई जव उनको पिता वासुदेवले जन्मनसाथ जेलबाट घरमा लैजाँदै थिए, त्यसबेला शेषनागले तुफानबाट रक्षा गरेका थिए । त्रेता युगमा शेषनागले लक्ष्मणको रुप लिएको थियो र द्वापर युगमा बलरामको रुप लिएको शास्त्रमा उल्लेख छ । दुबै जन्ममा उनले राम र कृष्णको साथ पनि दिएको पाइन्छ ।
एभरेष्टमा तीजगीत प्रतियोगिता
नहरपुरमा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
टाटासुमो दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी स्वदेशमा नै उद्यमी…